Injongo yesambatho ebomvu kwiphupha lamadoda nabasetyhini. Ukubona ezo zibopho kuwe okanye kwintombazana engaqhelekanga.
Intsingiselo yobuthongo obunxibe ngengubo ebomvu.
Kwabaninzi, iingubo ezibomvu okanye isambatho sombala ofanayo kukubonakalisa iimvakalelo ezinomdla kunye nodlova. Kodwa uvavanya njani ukuba le ngqayi yeengubo ifike kuwe ekuphumleni kobusuku? Incwadi yethu yokuphupha iya kukunceda uqonde indlela yokutolika imibono enjalo kunye neziphi iziganeko ezizilindelwe kwixesha elizayo.
Kuninzi kuxhomekeke ekubeni ngubani obona ingubo ebomvu ephupheni nendlela. Sinika ingcaciso epheleleyo esekelwe ngokuchanekileyo kule miba.
Iingubo ezibomvu kwintombazana
Indoda eye yabona iphupha elinjalo kufuneka ilungiselele iziganeko ezimbi ebomini. Uninzi kunokwenzeka, kwixesha elisondeleyo lilindele ithemba elithekileyo kunye neengxaki zempilo ezilula.
Ukubona umntu ongeyena ngengubo ebomvu kuthetha ukuba umphuphi kwisithuba esithile sokuphila sisondele kakhulu kwiimvakalelo kunye neemvakalelo ekwenzeni izigqibo, kunokuba kubalwe ngokulinganayo. Kodwa musa ukuphelelwa lithemba, kuba le nto iyakunceda ukuba ubhekane neengxaki zobomi ezibonakala zingenakuthembeka kwiqondo lokujonga.
Ibhinqa ukuba libone elinye inenekazi kwinto efana nelophawu oluya lumkisa ukuba ebomini bakhe iqhawe elinamandla liya kuvela. Kwaye ukuba xa uphupha umphunga umhlobo wakho, ongazange ucinge ukuba unelungelo lomncintiswano, uqikelele ukuba ufanele umjonge. Kungenzeka ukuba udibanisa ukuzithemba ngokuzenzekelayo.
Kwincwadi yephupha kaMiller kuthiwa ingubo ebomvu ephupheni - ukuphucula imeko yokuphila. Kungekudala uza kukwazi ukunqoba umqobo, owawulwela ixesha elide. Yonke into oyifunayo akuphelelwa yithuba lakho kwaye ulisebenzise le meko ngexesha lakho.
Iphupha apho umntu ezama khona kwengubo yalo mbala udlalwa ngabantu abanomdla kakhulu abasetyenziselwa ukufezekisa. Kubo, umbono wabanye ubaluleke kakhulu. Kodwa ngokukhawuleza kubalulekile ukulumkisa lowo mphupha: ungalindelanga ukuba amaphupha akho aya kuzaliseka ngcaciso emfutshane. Ukuze ufezekise, ufanele uhambe ngendlela enzima, kodwa ekugqibeleni uya kuvuzwa ngokusebenza kwakho.
Ukubona ukuba ugqoke ngengubo emfutshane ebomvu uthi unengqondo ngokwenene ukwazi ukuzonwabisa ubomi, uhlale uzisa izihlandlo zemihlali kwi-grey, kwaye uguqule umsebenzi oqhelekileyo kwizenzo zobomi. Kodwa isicatshulwa esilula sengqondo selophupha asipheli apho. Umphuphi ufuna ukulungelelwa ukuba omnye wabahlobo bakhe uya kumlungiselela ukumangaliswa.
Ukutshiza ingubo ebomvu ephupheni uthi uya kuhamba ngokukhawuleza kwaye ngenjongo ekujoliswe kuyo. Lo ngumqondiso olungileyo, obonisa ukuba uya kufezekisa oko ufuna, kodwa oku kuya kufuneka wenze isigqibo esingaqhelekanga.
Ingubo yomtshato yombala obomvu ayiyi kuzisa into enhle kumntu ophuphayo. Zonke iinjongo zakhe ziya kutshatyalaliswa, kwaye ithemba liza kukhohliswa. Abasetyhini ngokuchaseneyo, lo mbono uthembisa ubomi obunomdla kakhulu obuzalisekile. Kwaye ukuba unomntu okhethiweyo, umtshato wokuqala ungenakwenzeka, kwaye ulungele uthando lomntu omnye. Ingubo ende ende yombala oqaqambileyo uthi umntu ulungele ukwenza izinto ezinqabileyo, ukuze uzuze abanye. Kwaye, ngenxa yobulungisa, kufuneka kuqatshelwe ukuba uya kuphumelela.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ugqoke imbobo ebomvu ebomini boqobo - isenzo sinesibindi. Kwiingubo zombala ofanayo, kungekhona onke amantombazana aya kuthatha isigqibo, ngenxa yokuba kugxininisa kuphela ubulili kwaye akufanelekanga nakwabo abo banqwenela ukuhlala emthunzini. Kodwa amaphupha asebusuku nawo kufuneka ukuba azive njengomntu ohluke ngokupheleleyo kwaye anqume ngezenzo zobuqili.
Uphupha ntoni le ntlanzi?
Kuthetha ukuthini ukuthetha ephupheni kwifowuni?
Imoto yayiyiphupha - yayiya kuba yintoni?
Iminqweno yangasese yomntu
Ikhukhamba ihamba kunye noshizi
Adjika kusuka kwiitamatati
Intwasahlobo ekhanyayo kunye noM Mango: iqoqo leNkqutyana kunye neNdleko
"I-Pink Panthers" neempawu ze-BWT kwinqanaba leRussia ye-DTM Championship